"Kana Tave Pamwe"
Broadcast chiteshi: Da Ai TV, unogona kutarisa kumashure paTalkBB Chinese TV Type: Mimhanzi
Kunakidzwa kwevana, rwiyo rwechienzi, kutamba kwevana, uye shamwari dzevana inguva dzinotapira kupfuura dzose muhupenyu. Vakuru vanowanzopotsa kusava nemhosva uye kuchengetedza kwevana, asi vana vanonetseka kuti vave vakuru.Usina mhosva hunobatanidza nyika mumoyo yevana, zvekuti mhuri haina nzvimbo kana zvipinganidzo.
"Kana Tiri Vana Pamwechete" inopa iyo mifananidzo yakakosha uye mimhanzi yehudiki, uye nyika yevaraidzo yevana nekutamba inogara munguva pfupi uye nzvimbo. Mutambo wekutamba unonyatsorongedzerwa mitezo yemhuri inopa mimhanzi yekatuni yevana inogona kuterera pakati pemakore mashanu kusvika makumi mashanu, nziyo dzenzara dzinozivikanwa, machira emitambo yemitambo inodikanwa nehama nehama, uye mimhanzi yedhiramu yedhiramu nababa. Vanaamai vanobata mabhora, uye kuburikidza nekuseka kudakadza madhirama edhisheni, vanotungamira munhu wese muhuduku hwese.
"Mabhuku uye Nyaya dzezvematongerwo enyika"
Broadcast chiteshi: Macro TV, inogona kutariswa kumashure paTalkBB Chinese TV Type: Tsika
"Literature uye Zvematongerwo enyika" zvinotarisa kubvunzurudzwa kwakatanhamara kweTaiwan hunyanzvi hwekunyora uye zvinyorwa. Kunyangwe iri tsika yemagariro kana hunyanzvi hwazvino, Western kana Eastern tsika nhaka uye chisikwa, zvichaita kuti vanhu veChinese kupota nyika vanzwisise hunyanzvi hweTaiwan tsika kuburikidza nemishumo yehurongwa uye mu-studio hurukuro. Gadzira uye uwedzere mwero wetsika nemufananidzo, uye kuburikidza nerakakura ruzivo rwevasiki, kusimudzira hunyanzvi hwevanhu, nekukudziridza hunyanzvi hwemaonero hunobatanidza tsika dzekare uye mafungiro emazuva ano emafashoni. Pamusoro pezvo, kuitira kuti vashande huwandu hwakakura hwekunze vekuChina, "Literature uye Zvematongerwo enyika" vachapindawo vashandi veTaiwan vanokokwa neDare reCanese Rinoona Nezvemitemo kuti vagamuchire kubvunzurudza kwakakodzera, uye nekupa tsananguro yezvematongerwo enyika, yehupfumi uye yetsika.
"Makumi makumi matatu nenhanhatu Strategies"
Nyeredzi: Zhou Xinyi, Yuan Zhibo, Chen Xiaoyi, Li Yifeng
Nhepfenyuro Yekutepfenyura: Guangxi International genre: Koshitomu / Comedy
"Makumi makumi matatu nenhanhatu Strategies" anotaurira kuti vanoratidzira mai Niang na Zhuang Ku ndivo varidzi vaviri vechitoro, uye ivo vakabatana kumhanya Hong Kwai Fang uye imwe imba yekuvakira. Pakati penguva, Zhuang Ku akaveza makumi matatu nematanhatu ehondo dzehondo kubva kumadzitateguru ake kuenda mumatanda emapuranga, ayo aishandiswa kugadzirisa nyaya zhinji dzakamukomberedza. Rudo, hondo dzebhizimusi, marudzi ese ehupenyu matambudziko, uye kuve munyika zvinogona kugadziriswa nehurongwa uhu, pasina zvinokuvadza. Ivo vaviri "varume nevakadzi" vanoranga zvakaipa nekusimudzira zvakanaka, kubatsira njodzi uye kubatsira varombo, uye kuparadzira uku kushandiswa kweChimakumi matatu nenhanhatu Hondo yeHondo muhupenyu chaihwo senge nyaya yakanaka pakati pevanhu.
Nyeredzi: Feng Shaofeng, An Yixuan, Li Caihua, Yi Nengjing, Michelle He, He Shengming
Broadcast Channel: Fujian Strait Genre: Koshitomu / Comedy
"Suo Qingqiu" idhiraizi yemanzwiro yeRepublic of China, iyo inotaurira nyaya yeiyo Qing Dynasty muPingan Town. Mutambo uyu unotaura chinyorwa chakasarudzika chaisanganisira kunyengedza, kuuraya murume, rudo rwakadzama, njodzi dzinongoitika dzoga, kugadzirisa mamiriro ezvinhu, chakavanzika chechiratidzo, nezvimwewo. Zvinonzwisa tsitsi zvinoshungurudza uye nekunyanyisa kuronga kuronga .. Semuenzaniso, An Yixuan akatamba mukadzi Nha. Amai vekurera vakatengeswa, vakaroora vakaremara natenzi wavo, vakabatwa chibharo nashe wavo, vakasungirirwa nemuvengi, vakashungurudzwa naamai vamwene vake, uye hunhu hwahwo hwaive kugumha.
"Mumwe Munhu Ari Mubhedha"
Nyeredzi: Iye Keren, Guo Xiaoran, Wu Wenjia, Ge Honglin
Broadcast chiteshi: Chinese bhaisikopo chiteshi Type: Thriller
Moto muYunnan makore mazhinji apfuura wakaita kuti Bing'er arasikirwe nemudiwa wake Xiao Ming.Kubvira ipapo, haasati ari chete mukati mekurwadziwa kwekurasikirwa nemudiwa wake, haakwanisi kuzvikwidziridza, asi kazhinji anorota mukamuri chena chena nepamuri pasi pemubhedha. Kumubata nemaoko akapenda. Mushure mekuroora Kuangyu akanaka, mamiriro aBinger haana kuita zvakanaka kwenguva yakareba. Rimwe zuva, vaviri ava vakasvika kune rimwe guta rekare kushanya, uko Xiao Ming akange avimbisa kuunza Binger. Hazvibvumike kuti Xiao Ming haana kufa, muviri wake wese wakatsva zvakanyanya, aisada kuoneka pamberi peBing'er, asi aigara ega pano pakavanda, akabvunza Kuangyu kuti atarisire mudiwa wake.
Nyeredzi: Peng Yuyan, Yang Ying, Zhu Yuchen, Zhou Yang
Broadcast chiteshi: Chinese bhaisikopo chiteshi Type: Rudo
Kune chitsuwa chakanaka muMalawi, chine mvura yakajeka uye nejecha jecha, nzvimbo yakanaka kwazvo, ndiyo nzvimbo yakanaka kwazvo yekutandarira. Kune muridzi wechidiki wepachitsuwa anonakidzwa pachitsuwa ichi .. Anomhanyisa chete hotera pachitsuwa ichocho.Uye panguva imwe chete iyoyo, anogadzira maturakiti akasiyana siyana ekudzivirira uye anokwanisa kuita bhizinesi iri nerunako .. Kusvika pazuva rimwe, musikana anonzi Xia Mi Kuuya kwachinja kwese ...
Yakaita sei kudya pombi yemasimende? · Yakasiyana romance
Chaizvoizvo Zvakakura Zvikuru! 49 zvinhu zvaunofanira kuziva nezve Mocun